Le nkonzo online free. Kubalwe umthamo equleni, nasemingxunyeni Cylindrical
Kubalwe umthamo equleni
isikali umzobo 1: 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6
sangqa bottom D2
Ukubalwa umthamo emngxunyeni kakuhle okanye imilo Cylindrical
D1 - amaqula sangqa Upper
D2 - netoti ezantsi kakuhle
H - ubunzulu
Ukongezelela, ungakhankanya iindleko ngokomba amaqula neendleko nokususwa umhlaba.
Kukho ezintathu iindlela amanzi yamakhaya. Kuyenzeka ukuba sizakugrumba kakuhle ngokwabo, unako ukuqesha iingcali ukulungiselela le njongo, kodwa womba iqula kuloo ndawo yawo. Zonke iindlela bobabini eziluncedo nezingeloncedo. Abantu abaninzi abakhetha ukuzilungiselela iqula kwisiza, njengoko oko cheap, ungayisebenzisa iminyaka engaphezu kwama-50 kwaye ucoce le ulwakhiwo kulula kakhulu kakuhle. Ngaphandle ngokomba amaqula ayifuni imvume okhethekileyo. Kodwa ke, ukuba bembe elinye iqula kwi sayithi yakho, ezinye izibalo lokuqala kuyimfuneko. Apha uya kukunceda inkqubo yethu ubalo. Konke ekufuneka uyenze ukungena kwiinkalo ezifanelekileyo ubunzulu kakuhle, ububanzi bayo phezulu nasezantsi kunye neendleko kusembiwa kwingingqi yakho, ngoko ke inkqubo uakubala umthamo wequla, iindleko eziqikelelwayo yokwemba yakhe.
Ngokuphambili ngokomba amaqula elizimeleyo le ukhetho lwendawo kuye. Kubalulekile ukuba ukuyivala kumgama oyi-50 yeemitha kwakungekho yokugcina umgquba kunye nezinye ubumdaka ezingachaphazela ubulunga bamanzi. Akukho mfuneko ukuba amalungiselelo nibhalelana kakuhle ngaphezu kweemitha ezi-5 ukusuka kuloo ndlu. Kungenjalo kukho umngcipheko umonakalo isiseko sendlu ngenxa ukuhluzeka umhlaba.
Kubalulekile kwakhona ukuqinisekisa ubunzulu equleni. Ngokuba lo ubunzulu inokufumaneka izakhiwo ezifanayo kwiindawo ezikufutshane, nokuba pre-kusembiwa umngxuma.
Qaphela ukuba ungenza kundikhohlile iqula nangaliphi na ixesha enyakeni. Oko li fanele eli xesha ukususela kuJuni ukuya kuSeptemba. Ngeli xesha, akhwifa ephantsi, nto leyo ethetha ukuba bokha bangene impazamo evela zikhabane eliphezulu lamanzi ukuze zihlale emva kokuba izikhukula emthonjeni.
Into elandelayo ekufuneka moss, oku kuya kwandisa ukuba eludongeni kakuhle. Apha kukho iindlela ezininzi. Esi kwiplanga, eziphathekayo monolithic kunye izitena. Nganye kwezi ngeendlela zokomeleza kuneengenelo ezithile. Umzekelo, isakhelo ebiza ngamaplanga. Kodwa ukwenza njalo yena-wahlala mfutshane. ixesha yakhe yenkonzo elingagqithiyo kwiminyaka eli-15. Ukongeza, kufuneka zicocwe rhoqo ngonyaka ukusuka elitshisiweyo. Kwakhona ngexesha ndisomba bequla akuthethi ukomeleza iindonga, nto leyo ebangela umngcipheko ngokuwa emhlabeni.
eziphathekayo Monolithic kulungile ukuba ukhuphela wamanzi angene equleni. Kodwa, loo nto ixesha elide, kwaye iya kuxabisa kakhulu ineendleko kakhulu. Apha uneendlela ezimbini ongakhetha kuzo. Nokuba wenze iifomu eziphathekayo ukubethelela ngokwakho iindonga okanye ukuthenga kubo. Phambi kokuba ugqibe ukuba mawenze ntoni na, nceda uqaphele ukuba mveliso ye ring ikhonkrithi omelele ngaphezu kwabo ukuba ungenza ngokwakho. Kodwa, kakade, yaye ke uya kuhlawula ngaphezulu.
Ukwakhiwa kakuhle ngezitena kufuna izakhono ezikhethekileyo noqeqesho oluqhubekayo. Iindonga kufuneka kuqiniswa, kwaye isitena ukwakha isiseko. Kodwa, ngekhonkrithi, izitena akavumeli afunxwe kungena iqula lamanzi komhlaba.
Xa nequla ukulungele
ukhetha nantoni na uhlobo kakuhle isixhobo, amaxesha ngamaxesha, kufuneka zicocwe ngesibulali zinambuzane. Ukucoca kufanele kwenziwe ubuncinane kabini ngonyaka kwaye rhoqo ukuba kuwela kakuhle kuzo naziphi na izinto zasemzini. Kuba ukucoca kakuhle kulo Impontshelwa ngamanzi impompo. Emva koko, siya kuhla, senza iinkqubo eziyimfuneko unyango. Xa izinto zasemzini, intlenga, isanti kunye ukungcola zisuswe phantsi iindonga equleni, ukuvelisa iintsholongwane. Ukwenza oku, iindonga kakuhle usebenzisa ngomtshayelo okanye cebetshu oleleyo ende isipreyi le webleach.
Xa iqula uzele ngamanzi kwakhona, kufuneka kwakhona ukudibanisa ngomxube webleach kwi imali 150 mg nganye 1 ilitha yamanzi. Amanzi siwagxobhagxobhe kakuhle, wazigquma enesiciko, igcinwe iiyure ezimbini. Amanzi ngoko Impontshelwa umva wahlamba kakuhle ngamanzi ecocekileyo. Le nkqubo iphindiwe de ivumba chlorine shwaka.